Senetarada oo yeelan doona fadhi ay ooga hadlayaan arrinta Gavanaha Maamul goboleedka Nyeri – The Voice of Northeastern Kenya
Senetarada oo yeelan doona fadhi ay ooga hadlayaan arrinta Gavanaha Maamul goboleedka Nyeri
Star FM September 6, 2016
Senetarada dalka ayaa lagu wadaa in ay yeeshan kulan aan caadi ahayn oo socon doono muddo laba maalin laga bilaabo maalinta arbacada ah ee berito.
Waxaa la filayaa in arrimaha ugu weyn oo ay ka hadli doonaan ay noqoto talabadii ay goor sii horeysay qaaden aqalka wakiilada hoose ee countiga Nyeri kaas oo lagu ansixiyay in xilka laga qaado gavanaha Maamul goboledkaasi Nderitu Gachagua.
Seneterada ayaa waxay go’aamin doonaan in gudi gaar ah loo xil saari doono baaritaanada lagu sameyn doonno gavanaha si loo ogaado eedeymaha loo jeediyay iyo in aqalka oo dhan ay arintaas ay si wada jir ah u eegi doonaan.
Sidoo kale kulankaas labadi maalin ah ayaa aqalka waxuu xooga ku saari doonaan arinta ku saabsan in qofka siyaasiga ah uusan u guuri Karin xisbi kale marba hadii la siiyo tikidka xisbiga uu xiligaas kamidka yahay.
Sharci dajiyayaasha ayaa waxaa laga codsaday maanta oo talaada ahayd in ay jabiyaan fasaxii dheeri oo ay lahaayen islamarkaana maalinta berita ah ay soo xaadiraan aqalka si ay go’aan ooga gaaran xil ka qaadista gavanaha.
Gudoomiyaha gudiga shurucda iyo ganacsiga ee aqalka senetka Ekwee Ethuro sidoo kale ah afhayeenka aqalkaasi ayaa sheegay in dhamaan seneterada loo wacay si ay ooga soo qeyb galaan kulankaasi muhiimka ah.
Isbuuuci la soo dhaafay ayay ahayd markii aqalka wakiilada hoose ee Countiga Nyeri ay isku raacen in xilka laga qaado gavanaha talaabadaas oo ka dambeysay kadib markii lagu eedeeyay in uu xafiiskiisa si wanagsan u maareynin iyo in uu ka dhaga adeegay in uu wax faahfaahin ah ka bixiyo arrimo musuq maasuq oo lagu eedeeyay.
Dhanka kalana gavanaha countigaasi ayaa waxa uu ka hadlay xildhibaano iyo wakiilo oo uu shegay in ay si xoog ah u galeen xafiiskiisa waxana uu ugu baaqay in mudanayaashaasi laga qaado talaabo sharciga waafaqsan.
Nderito ayaa waxaa uu hoosta ka xariiqay in xildhibaanadaasi ay jexjeexen islamarkaana kala tuuren warqado iyo ducumentiyo uu doonayay in uu isku difaaco.
← Xildhibanka degmada mutuga oo codsi u diray Maxkamada kutaalo Maamul goboledka Kwale
Ganacsatada Khadkan dalkani Kenya oo xisaabinaya khasaaraha maanta kali soo gaaray →